Su'aalaha ku saabsan IIS, IMS iyo Manifold GIS - Geofumadas
Ka jawaabidda su'aalaha kulankaygii ugu dambeeyay ee farsamoyaqaanada oo jabinaya qumbaha degmooyinka ee abuurista adeegyo daabacan oo leh Manifold GIS, si loo dhammeeyo Buugga Manifold ee aan horey u soo sheegnay.
Ujeedada abuurista adeegyadan ayaa ah in waaxda 'cadastre' ay u adeegi karto xogta, iyada oo aan loo baahnayn in lala wadaago faylasha ama laga walwalo cusbooneysiinta. Tusaale ahaan Unugga Deegaanka ee Dawladda Hoose, Xakamaynta Magaalada ama isla shirkad isla degmada ah oo ka soo gali kara marin biraawsar sida lagu sameeyo Khariidadaha Google ama loo maro barnaamijka GIS sida ArcGIS.
1. Waa maxay sababta IIS?
IIS waa adeegga daabacaadda ee Windows horeyba u keentay, iyada oo loo marayo ASP, lagu daabacayo Manifold iyada oo loo marayo wadadan kaliya waxay u baahan tahay sameynta "fayl, u dhoofinta html". Suuragal kama ahan Manifold si loo abuuro adeeg daabicis iyadoo la adeegsanayo server Apache ah, oo aan ka aqaano ... ama aan ahayn dad uun.
2. Waa maxay nooca daaqadaha?
Laga bilaabo Windows XP-ka xirfadlaha ah ee loo yaqaan 'IIS' waa mid isku dhafan ... maxay nasiib u leeyihiin kuwa haysta Daabacaadda Guriga maxaa yeelay inkasta oo ay websaydhka ku leeyihiin waxay leeyihiin waa la daadin karaa, anigu iskuma dayin
3. Sidee loo adeegsadaa IIS?
Bilow, koontaroolo, ku dar ama ka saar barnaamijyada, ku dar daaqadaha daaqadaha. IIS ayaa la xushay oo badhanka "xiga" ayaa la adeegsadaa, waxay u badan tahay inuu dalban doono CD-yada daaqadaha, haddii horay loo sii rakibay ... sh * t kale.
4. Sidee loo bilaabaa adeegyada?
Laakiin nin, kaas oo yimaada daaqadaha akhriska !!!
Bilow, Guddi Xakameyn, Qalabka Maamulka, Adeegyada Macluumaadka Internetka. Dooro astaanta ciyaarta ee adeegga si aad u bilowdo.
5. Sidee loo abuuri karaa marin-u-helka maxalliga ah?
Ahaanshaha isla guddigaas su'aashii hore, mashiinka u shaqeyn doona marti-geliyaha ayaa la xushay, sifooyinka faylalka "websaydhyada" ayaa la xushay oo ku jira guryaha marinka loo adeegsado ee lagu soo daray foomka "IUSR_NAME OF MACHINE" illaa in khariidadaha la adeegsaday waxaa lagu wadaagi karaa isticmaale qarsoon.
Dabcan, waxaa jira siyaabo kale oo aad u adag oo lagu sameeyo.
6. Sidee loo abuuraa adeega daabacaadda?
J * der! Sida aadan akhrin blog, 5 dhibco yar, halkan ka akhri, Halkan, Halkan y Halkan ka dibna wuxuu ii yimaadaa inuu i weydiiyo.
7. Sidee loo wadaagaa khariidadaha gudaha intranet?
Fudud, haddii aad ku dhex jirtid isla shabakad, kaliya qor IP-ga. Si aad u ogaato IP-ga, ku samee mashiinka u adeegaya xogta "bilow, orod, cmd, gal" oo ku qor ipconfig halkaas.
Waa inay soo baxaan IP-ga mashiinka waa in ay noqdaan lambar sida 192.168.0.109 si ay ula socdaan user in shabakada dooran IP ah ee browser ah, iyo khariidada map, waxaad arki kartaa adeega daabacay.
Helitaanka wuxuu noqon lahaa:
192.168.0.109 / khariidado /
Haddii aad rabto inaad wadaagto khariidado kala duwan, adigoon wax badan horumarin, waxaa lagu daabacayaa faylal gooni ah, haddii aad horey u rabto inaad sameysato menu, waxaad horumarin kartaa bog aasaasi ah oo leh xiriiriyeyaasha khariidadaha kala duwan ... haddii kale, qaabab fudud oo fudud. Haddii ay dhacdo inaad rabto inaad ku sameyso internetka ... waa sababta loo diro boosteejo kale maxaa yeelay waxay u baahan doontaa IP dadweyne ama jug kale.
8. Sida loo wadaago khariidado leh AutoCAD ama ArcGIS?
Haddii xulashooyinka iyo wfs fursadaha la hawlgeliyo marka la daabici karo, user of ArcGIS, GvSIG, Microstation V8i, AutoCAD Map ama codsi kasta oo taageera adeegyada OGC ayaa laga yaabaa inay xogtan u maraan xogtan:
Xaaladdan waxaan ku arki lahaa sawirro
Xaaladdan waxaad ka soo qaadan kartaa lakabyada
Post Previous" Hore IMS Manifold, oo wax badan samaynaya
Post Next Yaa doonaya inuu ku guuleysto NokiaNext »
2 Jawaabaha "Su'aalaha ku saabsan IIS, IMS iyo Manifold GIS"
Laakiin ma u shaqeysey markii ugu horeysay ama marnaba?
Handz isagu wuxuu leeyahay:
Waad salaaman tahay saaxiib, waa su'aal…. Markii aan ku rakibo IIS 7 Windows Vista, waa inaan galo IE7 oo aan ku qoro Localhost. Laakiin kahor, bog lama helin oo soo muuqday, hadda wuxuu umuuqdaa mid faaruq ah oo bog guri ma muuqdo, waxay ila muuqataa midab guduudan, waayo? Maxaa dhaca waxaana loo maleynayaa inay ku qaadato xisaabteyda Maamulahayga sidii oo aysan ahayn maamule ...